Munaasabada Xuska 15-ka August oo Lagu Qabtay Dalka Yemen iyo Masuuliyiin ka Qayb Gashay – Rasaasa News
Munaasabada 15-ka August ayaa si weyn loogu xusay, magaalo madaxdda dalka Yemen ee Sanca, iyada oo munaasabada ay goob joog ahaayeen masuuliyiinta Jaaliyada Ogaadeeniya ee Yemen (JOY).
Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo loogu dabaal-dagayay 15-ka August 2014 oo ah 30-guuradii ka soo wareegtay markii la aas-aasay Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeniya (JWXO), ayaa ka dhacday Xaafada Saafiya ee Magaalada Sanca.
Xafladan oo lagu qabtay xarunta Jaaliyada Ogaadeeniya (Ogaden community Center) ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta ugu saraysa Jaaliyada Ogaadeeniya ee dalka Yemen (JOY), madaxda gudiga Qaxootiga Ogaadeniya, madaxda haweenka, madaxda OYSU faraciisa dalka Yemen, aqoon yahano, dhalin yaro, Culumaa,udiin iyo wax garad ka soo jeeda Ogaadeeniya.
Munaasabada oo ahay munaasabadii ugu waynayd ee ay qabato Jaaliyada Ogadeeniya, ayay ka soo qayb galeen dad boqolaal kor u dhaafayay, kuwaas oo badankoodu ku labisnaa calanka Ogaadeniya.
Shirka waxa lagu furay wacdi diini ah ka dibna heesta calanka ayaa loo saro kacay, iyada oo kooxda ‘Horseed Qaran’ soo bandhigeen Suugaan halgameed ay wacdaro ka dhigeen madasha, ka dib markii mar qudha ay yeedhay jugta iyo diryaanka dhaantada cagta iyo midhaha la is la helayo ee kooxda fanka ee Horseed Qaran. Erayo ammaan iyo qadirta loo hayo Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogaadeeniya muujinaya CWXO iyo masuuliyiinta Kaadirta JWXO erayadaas oo ay ka mid ahaayeen “Wiilka raanta ridi raashka, reenka JWXO la rabaaye, ku raaxeeysa naftaydu.” Waxa cirka is ku shareerayay qaylo iyo sawxan ay waheliso eli’li iyo mashxarayd (ka turjumaysa sida raali looga yahay geediga ay ONLF ugu jirto xoriyad u raadinta umada dulman ee Ogaadeeniya) mar wal ba oo ay goobta ka hadlaan masuuliyiinta nasiibka u helay ee loo igmaday in ay munaasabada ka hadlaan.
Dadka meesha soo buuxdhaafiyay oo carruur iyo cirroole lahaa, ayaa laga dheehan karay shacuurta wadaniyeed ee ka muuqata wajiyadooda iyo sida ay ugu ooman yihiin in ay helaan xoriyad farxad leh oo ay aakah ku dhahaan mar uun noloshoodataas oo ay ku iloobi lahaayeen Gumeysiga madoow ee la factirsaday.
Khud bado ku aadan hanbalyada dabaaldega 15-ka August, taariikh-halgameedka Ogaadeeniya iyo sida maanta Ogaadeniya ay ugu dhawdahay madaxbanaanideeda ayaa madaxda (JOY) iyo masuuliyiintii kale ee ka qeyb galay ay ka jeediyeen munaasabada. Waxa aan shaki ku jirin in ONLF noqotay Jabhad soo marta Ogaadeeniya ta ugu awooda badan, taas oo qotonsatay xidid dheer oo xornimo gaadhsiin kara ummada Ogadeeniya. JWXO oo u dabaal dayagaysa 30-sano jirkeeda ayaa ku naaloonaysa cudud ciidan iyo mid shacab labadaba iyada oo aan calanka Ogaadeeniya aynan cadceedu ka dhicin.
August 15, 1984, Aas Aaskii Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeeniya [Jwxo]